Dibloomada - Khabiirka BIM MEP - Geofumadas
Koorsadani waxaa loogu talagalay adeegsadayaasha xiiseynaya aagga naqshadeynta korantada, oo doonaya inay bartaan qalabka iyo hababka si dhammaystiran. Sidoo kale, kuwa doonaya inay dhammaystiraan aqoontooda, maxaa yeelay qayb ahaan waxay bartaan softiweer waxayna rabaan inay bartaan isku-dubbarididda qaab-dhismeedka meertooyinkeeda kala duwan ee naqshadeynta, falanqaynta iyo dejinta natiijooyinka wejiyada kale ee geeddi-socodka.
U dhis awoodaha qaabeynta, falanqaynta, iyo iskuduwida tubooyinka, korantada, iyo korontada (HVAC) nidaamyada. Koorsadani waxaa ka mid ah barashada Revit, barnaamijka ugu isticmaalka badan berrinka kaabayaasha BIM; iyo sidoo kale adeegsiga aaladaha ay macluumaadka ku dhexjiraan wejiyada kale ee geedi socodka sida NavisWorks. Intaa waxaa sii dheer, waxaa ku jira qaab fikradeed oo lagu fahmayo dhammaan wareegga maaraynta kaabayaasha iyadoo la raacayo habka BIM.
Koorsooyinka waxaa loo qaadan karaa si madaxbanaan, iyadoo la helayo diblooma koorso kasta laakiinDibloomada BIM MEP»Waxaa la soo saarayaa oo keliya marka isticmaalaha uu qaato dhammaan koorsooyinka safarka.
Faa'iidooyinka lagu dabaqo qiimaha Dibloomada - Khabiirka MEP ee BIM
MEP - Nidaamyada tuubooyinka ……. USD 130.00 24.99
MEP - Nidaamyada korantada ……… .. USD 130.00 24.99
Habka BIM …………………… .. USD 130.00 24.99
Post Previous" Hore Koorsada BIM 4D - adoo adeegsanaya Navisworks
Post Next Koorsada 'Revit MEP Course' - Qalabka Farsamada ee HVACNext »